घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू सेनेगालिस फुटबल खेलाडीहरू उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ "Gueye"। हाम्रो आइडिसिसा गिईई बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म।
विश्लेषणमा उनको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक उत्पत्ति र पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्य, जीवन शैली र उहाँका बारेमा अन्य साना तथ्यहरू समावेश छन्। हो, सबैले आफ्नो विरोधीहरूलाई प्रेस गर्न र पारित गर्न रोक्ने क्षमताको बारेमा जान्दछ। यद्यपि, केवल केहि कम आइडियािस गिईईको जीवनी विचार हो जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्नु, आइडिसिसा गिईईलाई सेप्टेगलमा डकारमा सेप्टेम्बर 26 को 1989th दिनमा जन्मेको थियो। उनी आफ्नो आमा, माई गिईइई र एक बुबालाई जन्मेका थिए जसको बारेमा केही थाहा छ।
इडिसिसा गिईईको आमा मेरी। क्रेडिट: आईजीएमएफ।
अफ्रिकी जराहरूसँग मिश्रित जातीयताको सेनेगलसी राष्ट्रियको दोहोरो भाइहरू जसको थोरै जान्दछ र तिनका साना भाइबहिनीहरुलाई पहिचान गर्नका साथ डकारमा उनको जन्मस्थानमा उठाइयो।
डकारको त्यस धौलाग्दो सडकमा बढ्दै जान्छ, जवान गिईईले फुटबलको लागि असीमित प्रेम थियो। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू सँधै फुटबल फुटबलको लागि साथीहरूसँग सामेल हुनका लागि खानेकुराहरू समावेश गर्न छिटो छिटो हुन्थ्यो।
इद्रिस गिईईले डाररको धूल सडकमा फुटबल खेल्न थाले। क्रेडिट: मास्टरफाइल र फुटबलपाउनेहरूचलापनपाठ।
उनीहरूमाथि उनीहरूले भने, Gueye र तिनका साथीहरूले स्यान्डी मार्गहरूमा न्यानो खेल्थे र अक्सर गोल पोष्टहरूका लागि सानो चट्टान प्रयोग गर्थे। फुटबल उत्साही सबै दिनसम्म खेलिने बित्तिकै उनको खुट्टा खाइरहेको बेला। त्यसपछि, उनले घर सेवानिवृत्त गर्नेछन् र उनको पक्षले बल संग सुत्नेछन्।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
समय गिईए 14 उमेर भएको थियो, उनले डकार मा आफ्नो सडक फुटबल को कामरेडहरु लाई विद्रोह को रूप मा राखयो किनकि उनको परिवार साली को समुद्र तट शहर को स्थानांतरित भएको छ जो मेजबान Diambars प्रशिक्षण स्कूल।
आफ्नो फुटबल लिनको लागि अर्को चरणमा प्रयास गर्ने अवसरमा कैशिंग, गिईई डेम्बर्स प्रशिक्षण विद्यालयमा नामांकन भयो जहाँ उनले आफ्नो वर्षको शैली शैलीको विशेषताहरू सिक्ने र सिकाउने वर्ष बिताए।
इडिसिसा गिईईमा नामाकरण गरिएको थियो Diambars प्रशिक्षण स्कूल जब उहाँ 14 वर्षको बारेमा थियो। क्रडिट: फुटबलप्लेयरहरूबिन्दुपाठ।
Gueye पछि स्केट्स ले लेल ले आफ्नो पांचवें वर्ष Diibars (2008) संग लाया लीग ले Ligue 1 पक्ष जहां उनि रैंक को माध्यम ले गुलाब र 2010 - 2011 सीजन को समयमा क्लब को पहिलो टीम मा तोडफोड गर्यो।
इडिसिसा गिईइईले उनको पाँचौं वर्षमा दिबेरर्स (एक्सएनएमएक्सएक्स) सँग लिली द्वारा पत्ता लगाइएको थियो। क्रेडिट: टेलीसेनेगल।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ र रोड प्रसिद्धि स्टोरी
लिलीको पहिलो टोलीको साथमा गिईईले फ्रान्सेली पक्षलाई 1-2010 सिजनमा लिग्युन 2011 शीर्षक जितेकी थिइन् र लीगमा साथसाथै यूईईए च्याम्पियन्स लीगमा नियमित स्टार्टर बनेको थियो।
आइडियािस गिइयय, यद्यपि एक नियमित स्टार्टर छैन, लेलिले 1-2010 सीजनको समयमा लिग्यू 2011 शीर्षक लिई मद्दत गर्यो। क्रेडिट: ट्विटर।
चार वर्ष पछि गुइएईले जुलाई 10 को 2015th मा अस्टोन विलालाई अङ्ग्रेजी साइडमा पुग्यो। उनले क्लबले रेजिजनमा उत्प्रेरित गर्नुअघि एकपटक नेट पत्ता लगाउन सफल भयो, एक विकास जसले गिईईको क्यारियरको पहिलो एन्टिलेक्स्याक्सलाई चित्रण गर्यो।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
त्यसपछि पुनः सुरुवात विलाको साथ आफ्नो अनुबंधमा रिलीज क्लियर ट्रिगर गर्दै गुईएले एक्सनएनएनएनएक्सएक्सएक्सको एनएनएक्सएमक्समा एवटनसँग चार वर्षको सम्झौता हस्ताक्षर गरे र 2-2016 सिजनको समयमा क्लबसँग नियमित रूपमा नियमित रूपमा बन्नुभयो।
आइडिया2को XNumXnd मा एडि्रिस गिईएई एथेटन को लागि हस्ताक्षर गरे। क्रेडिट: Skysports।
यो Everton संग थियो कि Gueye पहिले सबै को लागि यूरोप को पांच शीर्ष लीग मा सबै भन्दा राम्रो टकल्स र अवधारणाहरु दर्ज को रूप मा पनि 100 जीतने को लागि पहिलो खेलाडी बन्यो 2016-2017 सीजन को समयमा यूरोपेस शीर्ष पांच लीगहरुमा टेकल्स। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
Gueye को लेखन को समय मा विवाहित छ। हामी तपाईंलाई आफ्नो डेटिङ इतिहास र वैवाहिक जीवन बारे तथ्यहरू ल्याउँछौं। सुरु गर्न, Gueye पत्नी, Pauline बदल्यो पहिले कुनै पनि आइतवार मिति छैन भनेर थाहा छैन।
इडिसिसा गिईईले आफ्नो पत्नी पॉलिनसँग। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
यद्यपि सानो प्रेमिका कसरी भेटिए भन्ने बारे जान्दछन्, तिनीहरू एकसाथ खुसी हुन्छन् र उनीहरूको विवाह इसहाक भनिने छोरा जन्माएर विवाह गरे। यो जोडीले अर्को साथी वा एक छोरीको स्वागत गर्न धेरै लामो नहुन सक्छ।
आइतबार पेलिइन र छोरा इसहाकसँग आइडिसि गिईयका फोटोहरू। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
इडिसिसा गिईई मध्य-मध्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। हामी आफ्नो पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरू ल्याउछौं जसको आमाबाबुको साथ सुरु हुन्छ।
आइडियासिस गिईई आमाको बारेमा: माई गिईइ डिफेंडरको आमाको नाम हो। उनी एक हेरविचार र सहायक आमा हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सडकबाट गुइईको पर्याप्त हेरविचार गरेकी थिईन शुरुवात जीवन बिताउन सम्म सम्म लिली छोड्न सकेन। म्येमीले गिईईको पुरानो र साना बहिनीलाई मातृभाषा पनि राखेका छन्।
आइड्रिसा गिईईको बुबाको बारेमा: Gueye एक पिता को जन्म भएको थियो जसको बारे मा केहि थाहा छ। शौकिया फुटबल खेल्ने पिताले फुटबलमा गिईईको चासो उत्तेजित गर्न श्रेय गरेको छ जब उनी केवल एक बच्चा थिए।
आइड्रिसा गिइनेको सिकिरीजको बारेमा: Gueye सँग भाइयों र बहनों को बारे मा केहि छ कि यस तथ्य को लागि बचाव को बारे मा जानिन्छ कि उनको दुई पुराना भाइहरु पेशेवर फुटबल खेले थिए तर Gueye जस्तै कुनै सफलता थिएन।
उनको परिवारको अज्ञात सदस्यहरु संग आइडिसि गिईई। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
आइड्रिसा गिईईको सम्बन्ध सम्बन्धी: Gueye को तत्काल परिवार ले दूर, उनको मातृभाषा र दादी र उनको आमाबाबुको दाजुभाइ को बारेमा केहि थाहा छ। त्यसैगरी, डिफेंडरले अचम्म, चावल, काजिन र भित्तालाई बचाउछ जुन उनको बचपनको कथामा पहिचान गरिएको छैन र उनीहरूको जीवनको उल्लेखनीय घटनाहरू सम्म पुग्न सक्दैनन्।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
इजरास गिईईले कुन कुरालाई टिकाउँछ ?. हामी तपाईंलाई Gueye को व्यक्तित्व को निर्माण को रूप मा फिर्ता आना तपाईं उनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मा मदद। सुरू गर्न, Gueye को व्यक्तित्व लिबिया राशिफल लक्षणहरूको मिश्रण हो।
उहाँ ध्यान केन्द्रित, भावुक, कडा परिश्रम गर्नुहुन्छ र उनीहरूको व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा चिट्ठीबारे जानकारी दिनुहुन्छ। आफ्नो चासो र शौकबारे, Gueye मित्र र परिवार संग राम्रो समय व्यतीत गर्दछ, चलचित्र हेर्न, संगीत र नाच सुन्न।
संगीत सुन्नु आइडिसिसा गिईईको स्टोरी गतिविधिहरु मध्ये एक हो। क्रेडिट: संरक्षक.
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
इद्रिस गिईईको शुद्ध मूल्य अझै पनि समीक्षा अन्तर्गत छ। यद्यपि, उनीसँग € 20,00 मिलियनको बजार मूल्य छ। आफ्नो धन को उत्पत्ति उनको फुटबल प्रयास देखि छ, जबकि उनको वेतन र खर्च को पैटर्न को विश्लेषण देखि थाहा छ कि उनको एक रूढ़िवादी जीवन शैली छ।
नतिजाको रूपमा, उनको घरको साँचो मूल्यको बारेमा चिनिन्छ, जबकि उनको कार सङ्ग्रहको पूर्ण तस्वीर अझै सम्म बुझ्न सकिन्छ किनकि उनीहरु एक चोटि एक सेतो मर्सिडीज कारमा घर चलाउन एक पटक हेरिएको छ।
इदिसिसा गिईयले घर चलाउन थाले। क्रेडिट: Youtube।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो Idrissa Gueye बचपन जीवनी लपेट गर्न, यहाँ अज्ञात वा कम ज्ञात तथ्याङ्कहरू जुन शायद नै उनीहरूका जैवमा समावेश छन्।
इडिसिसा गिईई केहि फुटबल खेलाडिहरु मध्ये एक छ जुन कुनै टैटू छैन।
Idrissa Gueye सँग कुनै टैटू छैन। क्रेडिट: WTFoot।
उहाँले कहिल्यै पिउने देखेको छैन न त उहाँले धूम्रपान गर्न दिनुभएको छ।
आफ्नो धर्म को बारे मा, Gueye एक मुस्लिम हो र एक अभ्यास मा एक।
इदिसिसा गिइयय एक व्यावहारिक मुसलमान हो। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र इन्स्टाग्राम।
Gueye चालुहरु संग ठूलो क्लबहरु जस्तै पीएसजी र मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेखन को समय मा लिंक गरिएको छ।
इजरास Gueye बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य - भिडियो सारांश
कृपया तल पाउनुहोस्, यो प्रोफाइलको लागि हाम्रो YouTube भिडियो सारांश। दयालु भ्रमण र सदस्यता लिनुहोस् हाम्रो YouTube च्यानल थप भिडियोहरूको लागि।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Idrissa Gueye बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्यहरू पढ्नको लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।